Rooder Technology Limited zitholakala e Shenzhen. Silwela ukwakha brand TOP of Scooters kagesi e China. Through kweminyaka eminingana ukuthuthukiswa, siye owaziwa kokubili ezifuywayo kwezilwandle. Ithimba lethu professional is ezikhethekile self sekulinganisa Scooters, hoverboards futhi skateboard design, ukukhiqiza, ukumaketha kanye. Thina enikelwe ukunikeza kakhulu esifushane ibanga ezokuthutha namathuluzi ntu ngokunamathela umthwalo social kwagezi, carbon ongaphakeme nokuvikelwa kwemvelo.
Inkampani yethu kunesithembiso izinombolo ezimele empahla amalungelo core ubuchwepheshe. Ngenhloso ekuthuthukiseni kwagezi, Ukuvikelwa kwemvelo, sathola izitifiketi CE, FCC, RoHS futhi ngokuqinile unamathele ohlelweni ukuphathwa ISO9001. Ngenxa yeminyaka eminingi yokwenza zikhula, ekusungulwe Rooder ezimbalwa ezintsha onobuhle Scooters.
Scooters yethu / hoverboards / stakeboards ngabe athengiswe ukuze emhlabeni wonke futhi asetshenziswa kabanzi ezimotweni siqu, amaphoyisa emsebenzini, esithwele ngesitimela, sezindiza futhi emadokodweni esikhulu, izindawo ebabazekayo igalofu, njll
Inkampani yethu khulumela umqondo ibhizinisi yokwesaba imvelo, futhi siyakholwa ukuthi isayensi sishintsha ukuphila ukusungula design olunzulu kanye R & D simiso smart imikhiqizo ezemidlalo ongaphandle kanye izimoto siqu. Sinazo professional kunazo futhi abanolwazi design ithimba emkhakheni, futhi siphinde sibe ezibucayi ezimele ubuchwepheshe patent, eziphambili imishini yokuhlola kanye nokukhiqiza base iqinisekisa imikhiqizo ephelele. ezimele R & D ikhono lethu kakhulu wamukelwa umkhakha, futhi besilokhu owaziwa nge ubunye zobuchwepheshe ibhizinisi.
Ngokuthatha isitayela ukusebenza sina, esebenza kahle, singamethemba ukuzinikezela, bephikelela, sihlale ngcono ikhwalithi imikhiqizo kanye inkonzo yethu, ukwanelisa amakhasimende ethu.
Umbono wethu Yokwenza Ukuphila Okuningi kokunethezeka, Nezimo futhi ezinempilo.